Toronto G-20 Protest Videos
3 and Final soon..
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/28/20100အကြံပြုခြင်း
Black Bloc ဆိုတာ..
Black bloc လို့နာမည်ခံထားတဲ့အဖွဲ့ဟာအယောက်၁၀၀အောက်မှာရှိမယ်ခန့်မှန်းရပြီးအနက်ရောင်ဝမ်းဆက်
ခေါင်းစွပ်အနက်များဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။Queen Park ကနေစတင်ထွက်ခွာလာတော့ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ပါ.
တနင်္ဂနွေနေ့မနက်မှာ UNIVERSITY OF TORONTO ကိုဝင်စီးပြီး၇၀ခန့်ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။စုရပ်ဖြစ်တဲ့
QUEEN PARK မှာလူထုအစည်းအဝေးလုပ်ချိန်Black Bloc....ခေါင်းဆောင်ကိုလဲဝင်ဖမ်းပါတယ်...
။အဲဒီအထဲကအချို့ဟာQueen & Spadinaမှာကျန်ရစ်ပြီးရဲများနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေကကိုက်၆၀၀ပတ်ပတ်
လည်လောက်ကိုဖြန့်ဝိုင်းပြီးတရုတ်တန်းကဈေးဝယ်တွေပါမကျန်အကုန်စက်ဝိုင်းထဲဝင်သမျှကိုQueen & Spadinaလမ်းဆုံမှာညနေ၅နာရီကျော်လောက်ကစတင်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်ကားအလာကိုအေးခဲနေတဲ့မိုးရေ
ပါဘူး။ဖမ်းတဲ့ရဲလည်းမသိပါဖူး။Wrong place and wrong time လို့ပဲဆိုကြပါတယ်။
28 June 2010 ဒိုင်ယာရီ
28 June 2010 yeyintnge Diary.doc file download here
28 June 2010 Yeyintnge Diary
တရံရောအခါ ၊ ရွာသူငယ်ချင်း
မိန်းမလှလေး ၊ အပြေးရေချိုး
ပျော်တဲ့မိုးနှင့် ၊ ရွာရိုးကိုးပေါက်
ရွာလုံးဝုန်းဝုန်း မြည်ရော့ထင့် ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
တရံရောအခါ ၊ ရွာမှာကျောင်းပျော်
အစ်ကိုများတို့ ၊ မြို့ သို့သွားပြီး
တက္ကသီလာ ၊ ကျောင်းမဟာမှ
ရွာပြန်ကြ၏ ၊မြို့ ကအကြောင်း
လှလှပပ ၊ ပြုံးရွှင်ကြသည်
ညသန်ခေါင်တိုင် ကျော်ခဲ့ထင့် ။။။။။။။။။။။။။။။။
တရံရောအခါ ၊ ရွာမှာ ခိုးဝှက်
လုယက်ကြလျှင် ၊ ရွာဝင်ကျောင်းမှ
ညီညီညာညာ ရှိလေထင့် ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
တရံရောအခါ ၊ ရွာမှာအကြင်
ပေါင်းဖက်ရ၍ ၊ မင်္ဂလာပွဲ
ပျော်ရက်သူတို့ ၊ ဘယ်သူပြိုင်နိုင်
လှိုင်လှိုင်ရွှင်ပြ ရှုမ၀ထင့် ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
တရံရောအခါ ၊ ရွာမှာသည်သို့
သည်ပုံတို့နှင့် ၊ ၀ဲစို့မျက်ရည်
ဖြစ်တည်ထွန်းလျှက် ၊ အလွမ်းဆက်ပြီး
စိတ်များအိပ်မက် ၊ ခိုးဝှက်မက်ကြည့်
မသက်သာလေ ၊ ရွာနေမငြိမ်း
ပြည်ပတိမ်းပြေး ၊ ရင်မအေးသည်
လူသူကင်းမဲ့ လေရော့ထင့် ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
တရံရောအခါ ၊ ခိုးသောရန်သူ
ဓါးပြမူလည်း ၊ အတူလက်တွဲ
တိုက်ခဲ့ကြ၏ ၊ ရွာမှလူပျို
ညီအစ်ကိုတွေ ၊ ရွာကိုကာကွယ်
ရန်စွယ်နှိမ်၍ ၊ အေးငြိမ်ဝန်းကျင်
ပျော်လုံရွှင်ကြ ၊ ရှိခဲ့ကြလည်း
ဘ၀ကြမ္မာ ၊ ဆိုးလာလေခိုက်
တွေ့ကြုံကြိုက်ရ ၊ ဓမ္မမြွက်ယူ
ရန်သူမျိုးငါးပါး ၊ တပါးမင်းကြောင့်
ပြည်တွင်းပြည်သူ ၊ သားတူသမီး
အပူမီးတောက် ။ တောက်လျှောက်ခံစား
ကယ်သူကင်းမဲ့ ဖြစ်ရောထင့် ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ဆိုးရွားနေသည့် ဗကသ ခေါင်းဆောင် ဆေးကုသခံရန် ခန္တီးထောင်မှ မုံရွာဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိ
June 27, 2010 Freedom News Group
ခ န္တီး အကျဉ်းထောင်တွင် ထောင်ဒါဏ် ၁၅နှစ် ၆လ အကျဉ်းကျခံ နေရသော ဒီငြိမ်းလင်း၏ ကျမ္မာရေး အခြေအနေဆိုးဝါးမှုကို ဆေးကုသပေးရန် အာဏာပိုင်တို့ကခန္တီးထောင်မှခေါ်ဆောင် လာပြီး မုံရွာဆေးရုံသို့ယနေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင်ရောက်ရှိလာကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ရှိရသူတဦးမှ Freedom News Group သို့ပြောကြားသည်။
ဒီငြိမ်းလင်း ၏အဖိုးဖြစ်သူ ဦးစောဝင်းမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲချုပ် ထီးလင်းလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမတ်တဦးဖြစ်ပြီး သြဂုတ်လ ၇ရက်၊ ၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ သာယာဝတီအကျဉ်းထောင်တွင် အကျဉ်းကျခံနေရစဉ် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးဇော်ဇော်မင်းမှာလည်း ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွင် ဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်ပြီး တောင်ငူထောင်တွင် ထောင်ဒါဏ် ( ၆၅ ) နှစ်ကျခံနေရသည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတွင် ဗကသ ခေါင်းဆောင်တဦးအဖြစ် လှုပ်ရှားခဲ့သူတဦးဖြစ်သည်။ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်အပြီး တွင် စစ်အာဏာပိုင်တို့၏ လိုက်လံဖမ်းဆီးမှုကိုတိမ်းရှောင်ရင်း ၂၃ရက် အောက်တိုဘာ၂၀၀၇တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ ထောင်ဒါဏ် ၁၅နှစ်နှင့် ၆လ ချမှတ်ခံရပြီး ရန်ကုန်မြိုကမှ မိုင်၁၀၀၀ကျော်ဝေး
သော ခန္တီး အကျဉ်းထောင်သို့ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။ ခန္တီးအကျဉ်းထောင်သည် ရာသီတုလွန်စွာဆိုးဝါးသောနေရာတခုဖြစ်ခြင်း၊ အကျဉ်းထောင်အတွင်း ပုံမှန်ဆေးကုသခွင့်မရှိခြင်း တို့ကြောင့် ဒီငြိမ်းလင်းငှက်ဖျားရောဂါ နှင့်အခြားရောဂါများခံစားနေရသည်။ မျက်စိကိုက်ခြင်းဝေဒနာမှ သက်သာလာခြင်း မရှိဘဲ ပိုဆိုးလာကြောင်း ကို မိသားစုနှင့်နီးစပ်တဦးကပြောပြသည်။ မိခင်ဖြစ်သူမှာ
လည်း သားကိုတလှည့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုတလှည့် ထောင်ဝင်စွာသွားတွေ့နေရသည်မှာ လွန်စွာဒုက္ခပင်ပန်းဆင်းရဲလှ ကြောင်းကိုဆက်ပြောပြသည်။ ယခင်ကလည်းဒီငြိမ်းလင်း အဖွားဖြစ်သူမှာ ယ္ခုကဲ့သို့ ဒုက္ခမျိုး ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတဦးဖြစ်သည်။
ငရဲတံခါးဝသို့ (၅၂) ကီလို
ဂါမဏိ / ၂၈ ဇွန် ၂၀၁၀
“ကိုသောင်းရေး … ဥသျှစ်သီးလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နျူကလီးယားဗုံးတလုံးတော့ ရအောင်လုပ်ဗျာ”
(ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီး ဦးသောင်းကို မှာကြားချက်)
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်မာ၏ စကားဆုံးသည်နှင့် ပြည်တော်ချစ်အစိုးရ၏ တိုက်စစ်ဘက်မှ ပစ်လွှတ်လိုက်သော အမြောက်ဆန်သည် အနုမြူသိုလှောင်ကန်ကြီးကို တိုက်ရိုက်လာရောက်ထိမှန်၏။ ထို့နောက် ရွှေဝါပြည်ကြီးသည် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း တပြည်လုံး ဆက်ကာဆက်ကာ ပေါက်ကွဲပြီးနောက် အလွန်လှပစွာ ပျောက်ကွယ်သွား၏။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးမားဆုံးနှင့် အလှဆုံး ပေါ်ပေါက်လာသော မီးခိုးလုံးကြီး ပျောက်ကွယ်သွားသောအခါ ထိုနေရာ၌ ရေပြင်ကြီး ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ထိုနေရာကား အချို့က ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကြီးနေရာ ဖြစ်မှာပေါ့ဟု ဆိုကြ၏။
လူကြီးတွေအတွက်ပြောသော ရွှေဝါပြည်ပုံပြင်ကား ပြီးဆုံးပါပြီ။
(စာရေးဆရာ ရန်ကုန်ဘဆွေ၏ ၁၉၆၅ ခုနှစ်ထုတ် ‘ရွှေဝါပြည်’ ဝတ္ထု ဇာတ်သိမ်းခန်း)
နျူကလီးယားဗုံး ပေါက်ကွဲတဲ့အခါ မြေကြီးပေါ်မှာ လူလုပ်ငရဲဘုံတခု ချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ အပူချိန် စင်တီဂရိတ် ဒီဂရီ (၁၀) သန်းကျော်ကို တမုဟုတ်ချင်း ရောက်သွားပြီး ပစ်မှတ်နဲ့ အနီးကပ်ဆုံး အရာဝတ္ထုတွေ ချက်ချင်း အငွေ့ပျံ ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ လေထုဖိအားက ပုံမှန်အခြေအနေထက် အဆပေါင်း (၆၀၀) မြင့်တက်သွားပြီး တနာရီကို ကီလိုမီတာ (၁,၀၀၀) နှုန်း သိမ့်လှိုင်းအဖြစ် ပျံ့ထွက်ရိုက်ခတ်သွားပါတယ်။ ဒါတွေအပြင် သေမင်းတမန် ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ဓာတ်ရောင်ခြည်တွေကလည်း သက်ရှိကလပ်စည်းတွေကို ဖျက်ဆီးပစ်ပြီး ပြင်းထန်တဲ့ ကင်ဆာရောဂါအမျိုးမျိုးဖြစ် အသက်ဆုံးစေပါတော့တယ်။
အခု နအဖက နျူကလီးယားဗုံးရဖို့ ကြိုးစားနေတာ မငြင်းနိုင်တဲ့ အထောက်အထားတွေ ပေါ်လာပါပြီ။ တပ်မတော် သူရဲကောင်း ဗိုလ်မှူးစိုင်းသိန်းဝင်း သက်စွန့်ဆံဖျားယူလာတဲ့ အထောက်အထား တပုံတပင်ကြီးထဲမှာ နအဖရဲ့ ရန်သူတော် အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွေ၊ နအဖရဲ့ မဟာရန်သူတော် အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ဒေဂိုဂါးစီးယား စစ်စခန်းနဲ့ အိုကီနာဝါ စစ်စခန်းတွေအပေါ် (ကီလိုမီတာ ၃,၅၀၀ အထိ ပစ်နိုင်မယ့် တာလတ်ပစ်ဒုံးပျံ အောင်မြင်သွားတဲ့အခါ) ငရဲမီးကျမှာကနောက်၊ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်သားတွေအတွက် ငရဲတံခါးပွင့်သွားမှာကအရင် ဖြစ်မှာကို တွေ့နေရပါတယ်။
နအဖကတော့ ထုံးစံအတိုင်း နျူကလီးယားဗုံး မဟုတ်ပါဘူး၊ မုံလာဥပါလို့ မျက်စိမှိတ်ပြီး ဇွတ်ငြင်းမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဒီအထောက်အထားတပုံကြီးကို အသေအချာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး အန္တရာယ်ကို အခိုင်အမာ ထောက်ပြနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
နျူကလီးယားလောင်စာသံသရာမှာ မြေကြီးထဲ ယူရေနီယမ်သတ္တုရိုင်း တူးတဲ့အဆင့်ကနေ နျူကလီးယားဗုံးမှာ ထည့်ဖို့ သန့်စင်ပြီး ယူရေနီယမ်သတ္တုခဲဖြစ်အောင် ဓာတုဗေဒပိုင်းအရ လုပ်ဆောင်ရာမှာ အဆင့် (၉) ဆင့် ရှိပါတယ်။
အဆင့် ၁။ ယူရေနီယမ်သတ္တုရိုင်း တူးဖော်ခြင်း (ယူ-၂၃၈)
အဆင့် ၂။ ယူရေနီယမ်သတ္တုရိုင်း စစ်ယူခြင်း (ယူ-၂၃၈)
အဆင့် ၃။ အဝါရောင်ကိတ်မုန့် ထုတ်လုပ်ခြင်း (ယူ-၂၃၈)
အဆင့် ၄။ ယူရေနီယမ်အောက်ဆိုက်အမှုန့် ထုတ်လုပ်ခြင်း (ယူ-၂၃၈)
အဆင့် ၅။ ယူရေနီယမ်တက်ထရာဖလိုရိုက်အမှုန့်ထုတ်လုပ်ခြင်း (ယူ-၂၃၈)
အဆင့် ၆။ ယူရေနီယမ်ဟက်ဆာဖလိုရိုက် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ခြင်း (ယူ-၂၃၈)
အဆင့် ၇။ ယူရေနီယမ်ဟက်ဆာဖလိုရိုက်ကို ယူ-၂၃၈ မှ ယူ-၂၃၅ ဖြစ်အောင် သန့်စင်ခြင်း
အဆင့် ၈။ ယူရေနီယမ်တက်ထရာဖလိုရိုက်အဖြစ်သို့ ပြန်လည်ဓာတ်လျှော့ခြင်း (ယူ-၂၃၅)
အဆင့် ၉။ မဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုနှင့် ဗုံးဓာတ်လျှော့မှုလုပ်ပြီး ယူရေနီယမ်သတ္တုခဲ ပြန်လုပ်ခြင်း (ယူ-၂၃၅)
အဆင့် ၁၀။ ယူရေနီယမ်သတ္တုခဲကို နျူကလီးယားဗုံးတွင် တပ်ဆင်ခြင်း (ယူ-၂၃၅)
အခုရတဲ့ အထောက်အထားအရ နအဖဟာ အဆင့် (၉) မှာ သုံးတဲ့ ‘လေဟာနယ်သေတ္တာ’ နဲ့ ‘ဗုံးဓာတ်ပေါင်းဖို’ တို့ကို စမ်းသပ်ခဲ့တာ သေချာနေပါတယ်။ လေဟာနယ်သေတ္တာဆိုတာ ထိတဲ့အရာတွေကို လောင်လွယ်၊ စားလွယ်တဲ့ ယူရေနီယမ်တက်ထရာဖလိုရိုက် (ယူ-၂၃၅) နဲ့ မီးလောင်လွယ်၊ ဓာတ်ပြုလွယ်တဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုတို့ကို လက်နဲ့ တိုက်ရိုက်မထိစေဘဲ လေစုပ်ထုတ်ပြီး ကြားနေဓာတ်ငွေ့ထည့်ထားတဲ့ သေတ္တာထဲမှာ သမအောင် ရောစပ်ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ စပ်ပြီးရင် ဗုံးဓာတ်ပေါင်းဖိုထဲထည့် အပူပေးပြီး ပြင်းထန်တဲ့ ဓာတ်ပြုမှုဖြစ်အောင် လုပ်ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ ထွက်လာတဲ့ ယူရေနီယမ်ဟာ ယူ-၂၃၅ အဖြစ် သန့်စင်ပြီး သတ္တုခဲ ဖြစ်နေပါပြီ။ ဓာတုဗေဒနည်းပညာပိုင်း ပြီးသွားလို့ နျူကလီးယားဗုံးထဲ ထည့်ဖို့ စက်မှုနည်းပညာပိုင်းပဲကျန်ပါတော့တယ်။
ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာ ‘ဗုံးဓာတ်ပေါင်းဖို’ bomb reactor တခုကို အသုံးပြုထားလို့ မီးကျွမ်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ယူရေနီယမ်အရိုင်းကို အဆင့်ဆင့် ဓာတ်ပြောင်းတာတွေ သန့်စင်တာတွေ လုပ်ခဲ့ပြီးလို့ နောက်ဆုံးအဆင့် (၉) ကို ရောက်သွားပြီ၊ ယူ-၂၃၅ အဖြစ် သန့်စင်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့ ယူရေနီယမ်တက်ထရာဖလိုရိုက်ကို ယူ-၂၃၅ အဖြစ် သန့်စင်တဲ့ ယူရေနီယမ်သတ္တုဖြစ်အောင် ဓာတ်ပြောင်းတဲ့ စမ်းသပ်မှု လုပ်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မေမြို့ စက်ရုံ (၁) က ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ရတဲ့ ဖိအားမြင့် ရေနွေးငွေ့ပေါင်းစက် autoclave ကလည်း အဆင့် (၇) က ထွက်လာတဲ့ သန့်စင်ပြီးသား ယူရေနီယမ်ဟက်ဆာဖလိုရိုက်ကို အဆင့် (၈) မှာ သုံးဖို့ တနေရာက တနေရာ ပို့ဆောင်ရာမှာ သုံးတဲ့အတွက် နအဖမှာ သန့်စင်ပြီးသား ယူ-၂၃၅ ရထားပြီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ထွက်နေပါတယ်။
(၉၀) ရာခိုင်နှုန်း သန့်စင်တဲ့ ယူ-၂၃၅ ယူရေနီယမ်ဒြပ်ပစ္စည်းဟာ သာမန်နည်းပညာနဲ့ နျူကလီးယားပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ဖို့အတွက် (အလုံးပုံသဏ္ဌာန်မှာ) အခြေပြောင်းဒြပ်ထု (၅၂) ကီလို လိုအပ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ယူ-၂၃၅ (၅၀) ကီလိုအလုံးကို ယူ-၂၃၅ (၂) ကီလို အလုံးတလုံးက ပြေးဆောင့်လိုက်ရင် အနုမြူပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် (နည်းပညာမြင့်ရင်တော့ ၂၉ ကီလိုလောက်နဲ့ ဗုံးလုပ်နိုင်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်)။
ဗုံးဓာတ်ပေါင်းဖိုတခုကနေ ယူ-၂၃၅ ယူရေနီယမ်သတ္တု (၂၀) ကီလိုက (၂၅) ကီလိုအထိ ထွက်နိုင်ပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးစိုင်းသိန်းဝင်းရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေအရ သပိတ်ကျဉ်း နျူကလီးယားတပ်ရင်းမှာ ဗုံးဓာတ်ပေါင်းဖိုကို အသုံးချခဲ့လို့ နအဖဆီမှာ ယူ-၂၃၅ သတ္တု အနည်းဆုံး ကီလို (၂၀) ရှိနေပြီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ထွက်နေပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲဒီဗုံးဓာတ်ပေါင်းဖိုတခုတည်းကို (၃-၄) ခါ သုံးခဲ့တယ် သို့မဟုတ် အဲသလို ဗုံးဓာတ်ပေါင်းဖိုမျိုး (၃-၄) ခု သုံးခဲ့တယ်၊ အောင်လည်း အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင် နအဖလက်ထဲမှာ နျူကလီးယားဗုံးအဖြစ် ပုံသွင်းလို့ရပြီဖြစ်တဲ့ ယူ-၂၃၅ ကီလို (၅၀) မက ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဗုံးဓာတ်ပေါင်းဖိုနဲ့ စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်တာ မအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဗုံးလုပ်လို့ရတဲ့ ယူရေနီယမ်သတ္တု နအဖလက်ထဲ မရသေးတဲ့သဘော ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် ယူရေနီယမ်သန့်စင်ရေး အဆင့် (၇) ကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ခဲ့သလဲဆိုတာ မြှုပ်ကွက်ဖြစ်နေပါတယ်။ နျူကလီးယားလောင်စာသံသရာရဲ့ ဓာတုဗေဒပိုင်းမှာ ယူ-၂၃၅ ဖြစ်အောင် လုပ်ရတဲ့ အဆင့် (၇) ဟာ အရေးအပါဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ နအဖဟာ ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိတဲ့ လေဆာရောင်ခြည်သုံးပြီး အိုင်ဆိုတုပ်ခွဲထုတ်နည်း LIS ကို ကျင့်သုံးခဲ့တယ်လို့ ဗိုလ်မှူးစိုင်းသိန်းဝင်းနဲ့ နျူကလီးယားပါရဂူ IAEA ဒါရိုက်တာဟောင်း ရောဘတ်ကယ်လီတို့က ဆိုပါတယ်။ အီရန်၊ မြောက်ကိုရီးယား အပါအဝင် ကမ္ဘာမှာ အသုံးများတာက ဓာတ်ငွေ့ဗဟိုခွာအားနည်း Gas centrifuge ဖြစ်ပြီး အနည်းစုကတော့ ဓာတ်ငွေ့အမှေးပါးဖြတ်စိမ့်ဝင်ခွဲထုတ်နည်း Gas diffusion နဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ် သုံးပြီး အိုင်ဆိုတုပ်ခွဲထုတ်နည်း EMIS ကျင့်သုံးကြပါတယ်။
၂၀၀၉ ခု ဒီဇင်ဘာလမှာ ရခဲ့တဲ့ အတွင်းသတင်းတပုဒ်မှာ သပိတ်ကျဉ်း နျူကလီးယားတပ်ရင်းဟာ ယူရေနီယမ်သန့်စင်မှု enrichment (၈၅) ရာခိုင်နှုန်း ပြီးမြောက်နေပြီလို့ ကြားခဲ့ရပါတယ်။ အခု ဗိုလ်မှူးသိန်းဝင်းဆီက သိရတာနဲ့ ပေါင်းစပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ နအဖအနေနဲ့ ရှေ့ပြေးနမူနာ prototype တခုအတွက်လောက်တော့ သန့်စင်မှုကို တနည်းနည်းနဲ့ ဖြစ်မြောက်ခဲ့ပုံရပါတယ်။ နအဖစစ်တပ်ဟာ compartment system ခေါ် အကန့်လိုက်ခွဲတဲ့စနစ်ကို အင်မတန် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကျင့်သုံးတဲ့အတွက် တပြည်လုံးမှာ လှိုဏ်ခေါင်းတွေ အကြီးအကျယ် တူးနေတာကိုတောင် နအဖစစ်တပ်ထဲမှာ မသိသေးတဲ့ အရာရှိအရာခံ အကြပ်တပ်သားတွေ အများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်။
မေမြို့အရှေ့ဘက် နောင်လိုင်မှာရှိတဲ့ နည်းပညာအလုပ်ရုံ (၁) ကို ဗုံးဓာတ်ပေါင်းဖို လုပ်ခိုင်းတဲ့ ညွှန်ကြားချက်အမိန့်စာမှာ ဒီဗုံးဓာတ်ပေါင်းဖိုကို ‘နည်းပညာအလုပ်ရုံ (၅)’ ရဲ့ ‘အထူးဒြပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး သုတေသနဌာန’ မှာ သုံးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုဟိုးလေးတကျော်နဲ့ ဘွားဘွားကြီးပေါ်သွားတဲ့ မေမြို့-နောင်လိုင်စက်ရုံ (နည်းပညာအလုပ်ရုံ-၁)၊ ပခုက္ကူ-မြိုင်စက်ရုံ (နည်းပညာအလုပ်ရုံ-၂) အပြင် နောက်ထပ်စက်ရုံ (၃) ရုံရှိနေသေးတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်ရုံတွေမှာ အဆင့် (၇) ယူရေနီယမ်သန့်စင်မှုတွေ တနည်းနည်းနဲ့ လုပ်တာ၊ အဆင့် (၉) ယူရေနီယမ်ဓာတ်လျှော့မှုက ထွက်လာတဲ့ ယူ-၂၃၅ သတ္တုကို ဗုံးအဖြစ် တပ်ဆင်တာတွေ လုပ်နေနိုင်ပါတယ်။
အဆင့် (၇) နဲ့ အဆင့် (၉) မှာ ထွက်လာတဲ့ ယူရေနီယမ်က (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းအောက်ပဲ သန့်စင်တဲ့ နျူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖိုသုံး ယူ-၂၃၅ လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုအတွက်ဆိုရင် သန့်စင်မှုနိမ့် ယူ-၂၃၅ ကီလို (၄၀၀) လောက် လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုကနေ ပလူတိုနီယမ် ထွက်လာရင်တော့ နျူကလီးယားဗုံးလုပ်ဖို့ ပလူတိုနီယမ် (၁၀) ကီလိုဆိုရင် အခြေပြောင်းဒြပ်ထုရပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဓာတ်ပေါင်းဖိုက မြောက်ကိုရီးယားကနေ ရောက်မလာသေးပါဘူး။ နျူကလီးယားဗုံး အင်မတန် ရချင်နေတဲ့ နအဖဟာ ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မှုအတွက် (၉၀) ရာခိုင်နှုန်း သန့်စင်တဲ့ ယူ-၂၃၅ ကိုပဲ (ဥသျှစ်သီးလောက်ဖြစ်ဖြစ်) အရင်ဆုံး ရသလောက်လုပ်မှာ သေချာပါတယ်။
နိုင်ငံတကာအနုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ (IAEA) က နျူကလီးယားပစ္စည်း နည်းနည်းပါးပါးကို နိုင်ငံတွေမှာ ထားခွင့်ပေးထားပါတယ်။ အဲဒီသတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်ရင် IAEA ကို သတင်းပို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းမပို့ဘဲ လက်ဝယ်ထားနိုင်တဲ့ ပမာဏတွေက သဘာဝယူရေနီယမ် (၁၀) တန်အောက်၊ (၉၀) ရာခိုင်နှုန်း သန့်စင်တဲ့ ယူရေနီယမ် (၁.၁၁) ကီလိုအောက်၊ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်း သန့်စင်တဲ့ ယူရေနီယမ် (၅) ကီလိုအောက်၊ ပလူတိုနီယမ် (၁) ကီလိုအောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းမပို့ဘဲ ဒီထက်ကျော်ပြီးထားရင် IAEA က ကိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နျူကလီးယားဗုံး လုပ်နိုင်တဲ့ (၉၀) ရာခိုင်နှုန်း သန့်စင် ယူ-၂၃၅ အမျိုးအစား ယူရေနီယမ် (၁) ကီလိုရဖို့ သဘာဝယူရေနီယမ် အရိုင်း (၁) တန် လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် IAEA က မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုင်မယ့် အန္တရာယ်ထက် ပိုစိုးရိမ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်မှုအန္တရာယ်၊ မတော်တဆ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်မယ့် အန္တရာယ်တွေကို တပ်မတော်သားတွေနဲ့ ပြည်သူတွေ နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။ သဘာဝဓာတ်ရောင်ခြည်ပမာဏဟာ လူတွေအပေါ် တနှစ်ကို (၃၀၀) မီလီရင်မ် ကျရောက်နေပြီး လူလုပ်ပစ္စည်းတွေက ထွက်တဲ့ ဓာတ်ရောင်ခြည်က တနှစ်ကို (၆၀-၇၀) မီလီရင်မ် ကျနော်တို့အပေါ် ရိုက်ခတ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နျူကလီးယား ထိန်းချုပ်ရေးကော်မရှင်က နျူကလီးယားအလုပ်သမားတယောက်ဟာ တနှစ်မှာ မီလီရင်မ် (၅,၀၀၀) ထက် ပိုမထိတွေ့ဖို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ဟီရိုရှီးမား အနုမြူဗုံးကွဲတုန်းက ဓာတ်ရောင်ခြည် မီလီရင်မ် (၇) သိန်းကျော် ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ရုရှားနိုင်ငံ ချာနိုဘိုင်လ်ဓာတ်ပေါင်းဖို ပေါက်ကွဲတုန်းက ဓာတ်ရောင်ခြည်ပမာဏ မီလီရင်မ် (၈) သောင်းက (၁) သန်းခွဲထိ ထွက်ခဲ့လို့ လူ (၂၈) ယောက် သုံးလမပြည့်ခင် သေသွားခဲ့ပါတယ်။ ဓာတ်ရောင်ခြည် မီလီရင်မ် (၃) သိန်းခွဲက (၅) သိန်းအထိ မိနစ်ပိုင်းလောက် ထိတွေ့ခဲ့သူဟာ တလအတွင်း သေဖို့ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း သေချာပါတယ်။ မီလီရင်မ် (၁) သောင်းဝန်းကျင် ရေရှည်ထိတွေ့နေရသူတွေဟာ (၅) နှစ်က အနှစ် (၂၀) အကြာမှာ ကင်ဆာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ မီလီရင်မ် (၅) သောင်းကျော်ထိရင် ကင်ဆာဖြစ်ဖို့ သေချာပါပြီ။ အပြင်ကလာတဲ့ ဓာတ်ရောင်ခြည်ပမာဏနည်းလို့ မထိခိုက်နိုင်ပေမယ့်လည်း အစာထဲမှာ ပါသွားလို့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်သွားရင် ထိခိုက်နိုင်တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
နအဖရဲ့ နျူကလီးယားစီမံကိန်းနေရာတွေက သပိတ်ကျဉ်း၊ မေမြို့၊ မြိုင်၊ တောင်ကြီး၊ ဆော၊ စေတုတ္တရာ၊ ပွင့်ဖြူတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အုပ်စုအဆက်ဆက် သမိုင်းတလျှောက်မှာ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ညံ့ဖျင်းလှပြီး ငစနူကျလှတဲ့ မဆလ-နဝတ-နအဖဟာ ဒီနေရာတွေမှာ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကာကွယ်ရေး၊ မတော်တဆ ပေါက်ကွဲမှုကာကွယ်ရေးတွေ ဘယ်လောက်အာမခံချက် ပေးနိုင်ပါသလဲ။ အခုလို တနေရာနဲ့ တနေရာ ဝေးလံလှတဲ့ စက်ရုံတွေဆီ ယူရေနီယမ် ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကို စုတ်ပြတ်ညံ့ဖျင်းလှတဲ့ ကားလမ်း၊ ရထားလမ်း၊ ရေလမ်း၊ လေလမ်းတွေပေါ် စုတ်ပြတ်ညံ့ဖျင်းလှတဲ့ ယာဉ်တွေနဲ့ အသိပညာနိမ့်ကျအားနည်းသူတွေက သယ်ယူပို့ဆောင်ရာမှာ ဘယ်လောက် အန္တရာယ်ကင်း စိတ်ချရမလဲ။
ဓာတ်ရောင်ခြည်တိုင်းတဲ့ ဂိုင်ဂါကောင်တာ Geiger Counter စက်တလုံးကို ဒေါ်လာ (၃၀၀) ပေးရပါတယ်။ ဒါတွေကို မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်လောက်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထုတ်ပေးထားသလဲ။ အပျော့စား ဓာတ်ရောင်ခြည်ကာ ဝတ်စုံတစုံကို ဒေါ်လာ (၁,၀၀၀) ဝန်းကျင် ဈေးရှိပြီး အပြင်းစား ဓာတ်ရောင်ခြည်ကာ ဝတ်စုံတစုံကို ဒေါ်လာ (၁၀,၀၀၀) အထက် ပေးရပါတယ်။ နအဖက ဘယ်နှစ်စုံ ဝယ်ထားသလဲ။ နျူကလီးယားလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အဆောက်အဦတွေ ဓာတ်ခွဲခန်းတွေကရော မတော်တဆ ပေါက်ကွဲမှု ဓာတ်ရောင်ခြည်ယိုစိမ့်မှုတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ဒေါ်လာ သိန်းချီတန်တဲ့ အကာအရံတွေ၊ အင်ဆူလေတာတွေ၊ သတိပေးစနစ်တွေ ဘယ်လောက်အထိ တပ်ဆင်ထားသလဲ။
တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် ကင်ဆာအဖြစ်ခံကြဆိုပြီး ကျောက်ခေတ်စဉ်းစားနည်းနဲ့တော့ (၂၁) ရာစုမှာ အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ အဲသလိုဆိုရင်တော့ တပ်ချုပ်ကြီးအိမ်တော်နဲ့ ကြပ်ပြေးမြို့တော်ကို သပိတ်ကျဉ်းနျူကလီးယားစက်ရုံဘေး အရင်ရွှေ့လာခဲ့ပါ။ ငရဲပြည်ရဲ့တံခါးဝကို ရောက်ဖို့ သန့်စင်ပြီး ယူရေနီယမ် (၅၂) ကီလိုပဲ လိုပါတယ်။ ။
ဆလိုင်း ဟံသာစန်း | တနင်္လာနေ့၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၃၀ မိနစ်
ရဲနည် Monday, June 28, 2010
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/28/2010 1 အကြံပြုခြင်း
Toronto G-20 protest photos
Video File များဆက်လက်ဖေါ်ပြပေးပါမည်။ဤပိုစ့်တင်ချိန်ထိဆနပြဆဲဖြစ်ပါသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/27/20100အကြံပြုခြင်း
မမြင်ဖူးဘဲ အလှကိုခံစားတတ်ကြပါရဲ့ 
ရီမောပြီး ငိုကြွေးလို့ ပွဲကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်----။။။။။။။။။။။။။။။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/25/20100အကြံပြုခြင်း
Secret law passed by Ontario government gives police special powers during G20
Secret law gives police power to arrest anyone 5m within security fence
The law, which includes penalties of up to two months in jail anda$500 fine, went into effect on Monday. It expires next Monday, after the G20 wraps up in Toronto.
Toronto Mayor David Miller invited the 2,000-or-so foreign journalists covering the G8 and G20 summits to break away from their work in the media centre today and spend money in the city.
The Voice Weekly Journal Vol. 6-32, June 28 - July 4, 2010.
The Voice Weekly Journal Vol. 6-32, June 28 - July...